Ny vavaka amin-kery dia manondro bibilava sy maingoka. | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Ny vavaka mavesatra dia manondro bibilava sy maingoka.
Ny vavaka mavesatra dia manondro bibilava sy maingoka.
Ny mpino tsirairay dia nomena fahefana masina mihoatra ny devoly. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao dia tsy maintsy mahatakatra ianao fa tsy ny olanao ny olanao. Naterak'Andriamanitra ianao, noho izany dia ambony noho ny devoly sy izay rehetra azy fanjakan'ny aizina. Androany isika dia handray anjara amin'ny vavaka vavaka mahery mba hamotehana ny bibilava sy maingoka. Ireo teboka am-bavaka dia hanokatra ny masonao amin'ny fahefana nomen'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy Jesosy. Rehefa vita ny famakiana ity lahatsoratra ity dia hijanona tsy handositra ny devoly ianao ary hanenjika ny devoly. Ny tahotra dia hanjavona amin'ny fiainanao mandrakizay. Ny vanim-potoanan'ny fanjakan'i satana sy ny olom-bitany rehetra no hanomboka. Mamporisika anao aho hanokatra ny fonao rehefa mandalo an'ity fizarana ity ianao dia handresy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Inona avy ireo menarana sy maingoka?
Bibilava sy maingoka no devoly sy mpandraharaha maha-demony azy. Ao amin'ny Lioka 10:19, i Jesosy Kristy dia niresaka ny demonia ho bibilava sy maingoka. Ny devoly dia antsoina hoe bibilava lehibe, tsy mahagaga raha ny demony koa no nantsoina hoe bibilava sy maingoka. Ary ny lehilahy na ny vehivavy ratsy fanahy rehetra mitady ny fianjanao, dia menarana sy maingoka koa. Ny mpandraharaha ratsy fanahy rehetra miady aminao eo amin'ny fianakavianao, toeram-piasanao, toeram-piasana dia bibilava na maingokazy koa. Ny vaovao mahafaly dia nomen'Andriamanitra fahefana hanomezana azy rehetra ireo. Mba hametraka azy ireo izay eo ambanin'ny tongotrao. Fa maninona no nampiasa ny menarana sy maingoka i Jesosy Kristy mba hilazana demonia? Fantatsika fa avy amin'ny Fanahy Masina ny soratra masina, ary tsy manao fampitahàna tsotra ao amin'ny Baiboly Andriamanitra. Mba hampiasain'i Jesosy amin'ny menarana sy maingoka, hilazana demonia, tsy maintsy misy endrika sy toetran'ireny zavaboary ireny izay mety hita any amin'ny demonia. Andeha hojerentsika ny sasany amin'izy ireo.
Toetran'ny bibilava sy ny maingoka
1. Mampidi-doza: Samy bibilava misy poizina ny bibilava sy maingoka, ary ny poizina dia rano mahafaty mamono azy. Ao amin'ny faritry ny fanahy dia tandindon'ny fametrahana ratsy. Ireo demony dia misy poizina, manana fahafaham-po hametraka poizina ara-panahy amin'ny fiainan'ireo niharan'izy ireo. Betsaka ny olona ankehitriny, eny fa na ny mpino aza dia mijaly amin'ny tahiry ratsy na poizina ara-panahy, ny sasany aza dia maty noho ny fahorian'ity demonia ity. Saingy amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao, tsy mahay ianao, hoy i Jesoa Kristy dia maka bibilava ianao, ary na dia manondraka poizina ara-panahy aza ny devoly, tsy hanimba anao izany. Marka 16: 17-18.
2. Misoko mangina: Bibilava sy maingoka no manan-tsaina sy fetsy. Raha tsy mahatsapa ara-panahy ianao dia zatra mahita azy ireo ho avy. Ny devoly dia mpamitaka sy mpamitaka ary toy izany koa ireo demoniany. Namitaka an'i Adama sy Eva tao amin'ny zaridaina ny devoly ary naka fahefana tamin'ny zanak'olombelona ho vokatr'izany, rehefa tonga hamerina an'io fahefana io ho an'ny olona indray i Jesosy dia nanandrana namita an'i Jesosy ihany koa izy nefa tsy nahomby, satria nahay nandinika sy ara-panahy i Jesosy. Amin'ny maha-mpino antsika, dia tokony ho mailo isika, tsy izay fa glitters dia volamena, tsy tokony avelantsika hiambina mihitsy, tsy hanome toerana ho an'ny devoly ary tsy hahomby izy.
3. Masiaka sy manafintohina: Bibilava sy manafintohina ny bibilava sy ny maingoka. Masiaka koa ny demonia ao anaty natiora, tsy mitsikitsiky izy ireo, mivoaka mangalatra sy mamono ary manapotika. Raha tsy maintsy mandresy azy ireo ianao dia tsy maintsy ho kristiana mahery setra koa. ts ny herisetra ihany no maka azy amin-kery. Tsy mahafaly ny malemy paika sy tsy mampidi-doza ny fiainana, fa ny fahasahiana sy ny herisetra ihany no ankasitrahany. Tsy maintsy ho velona ny liona ao aminao. raha mbola miaro tena ianao dia hanohy hamely anao ny devoly, fa raha vao manafintohina anao ary manafika ny devoly, dia handositra anao izy. Jakoba 4: 7.
4. Azo hokapohina izy ireo. Ny menarana sy ny maingoka dia mety hotorotoroina, mety ho potipotika ihany koa ny demonia. Nomen’i Jesosy fahefana isika handrava ny demonia rehetra manohitra antsika. Ny devoly dia tsy antonony intsony, ianao amin'ny maha-kristiana anao, dia mahery noho ny devoly ianao. Na oviana na oviana ny devoly hamely anao dia hanorotoro azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mety hanontany ny olona hoe ahoana ny fomba hanoratako ny menarana sy maingoka amin'ny maha mpino azy. hojerentsika fa tsy ho ela.
Ahoana ny fomba hanorotoroana ny menarana sy maingoka
Misy fomba telo hanorotoroana ny menarana sy maingoka, izy ireo dia ny teny, finoana sy ny vavaka. Andeha hodinihintsika tsirairay avy:
1. Ny Teny: The tenin'Andriamanitra dia ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ny sain'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamnitra dia tohanan'ny tsy fivadihan'Andrimanitra. Midika izany fa izay rehetra lazain'ny teny, dia tsy misy devoly manohitra izany. Raha te handidy fahefana amin'ny devoly sy ny olony ianao dia tsy maintsy ho mpianatra ny teny. Tsy maintsy mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao ary mamela azy io hitoetra ao aminao feno harena. Jesosy dia feno ny teny, raha ny marina dia Izy no Tenin 'olona manokana. Rehefa tonga naka fanahy azy tany an-tany efitra ny devoly, dia nanohitra ny devoly tamin’ny tenin’Andriamanitra, Matio 4:10. Ny mpino izay feno ny tenin'Andriamanitra dia tsy afaka iharan'ny satana.
2. Finoana: Raha tsy misy finoana dia tsy afaka maneho ny herin'Andriamanitra ianao. Raha tsy manam-pinoana dia tsy afaka mandresy ny herin'ny maizina ianao.Faith dia ny fahatokisana tanteraka sy ny fahatokisana an'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny teniny. Rehefa matoky an'Andriamanitra ianao, dia tsy misy devoly afaka maharesy anao. Feno finoana i Jesoa Kristy ka izay no antony nandresahany ny devoly rehetra izay tonga tamin'ny lalany. Raha mbola ela ny finoana eo amin'ny toerany, handresy ny demonia rehetra izay alehanao ianao.
3. Vavaka:Amin'ny alàlan'ny Vavaka dia manatanteraka ny fitsarana ny fanjakan'ny aizina isika. Ny hery amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny finoantsika dia samy miseho amin'ny alàlan'ny alin'ny vavaky ny vavaka. Amin'ny alàlan'ny vavaka dia azonao atao ny mandidy ny herin'ny helo hiankohoka amin'ny tongotrao. Ataonao miady amin'ny tanjonao daholo ny hery fanoherana rehetra. Ny kristiana tsy mivavaka dia ho lasibatry ny devoly foana. Ny kristiana ihany no tsy mivavaka, dia miafara amin'i devoly. Nanangona hevitra mivavaka mahery aho mba hanorotoro ny menarana sy maingoka ho anao anio. Ankehitriny ampandrenesina anao ianao, ampio amim-pinoana ity vavaka ity ary raiso ny fahagagana ataonao eo noho eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
1. Ray ô, misaotra anao aho fa anao ny hery rehetra ao amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
2. Raiko, tonga amin-kerim-po ny sezafiandriananao fahasoavana aho hamonjy fangorahana sy fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy Anarany
3. Ry maso ratsy manara-maso ny hoaviko, mandidy anao handeha jamba amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy aho
4. Ny demonia teratany tsirairay izay mitsangana hanohitra ahy dia ringana ao amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
5. Izaho dia mamoaka areti-mifindra ampy isaky ny pharoah miady amin'ny fidirako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
6. Ny demonia rehetra manohitra ny tenin 'Andriamanitra amin'ny fiainako, dia ho rava ao amin'i Jesosy Kristy Anarany
7. Nafeniko ny drafitra rehetra avy amin'ny demonia isan-karazany hamelezana ahy amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
8. Mandidy ny zana-tsipìka rehetra mikendry ny fiainako aho mba hiverenany any amin'ilay mpandefa an'i Jesosy Kristy
9. Ny hazo fijaliana rehetra izay mitombo ao amin'ny laharako dia hongotana sy ho levon'ny afo amin'ny anarana Jesosy Kristy
10. Ny demony rehetra izay te hamonoana hangalatra sy hanapotika ny fiainako dia haringana ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
11. Ny mpandraharaha demokratika rehetra nanakarama ny hisintona ahy, hianjera sy ho faty amin'ny anarana Jesosy Kristy
12. Ny fanekena rehetra momba ny fiainana mafy dia rava ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
13. Ny fanahy bitika rehetra izay miasa mifanohitra amin'ny fiainako, dia haringana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
14. Ny tahiry ratsy rehetra amin'ny fiainako dia ariana amin'ny ran'i Jesosy Kristy ankehitriny.
15. Ny fahoriana rehetra mikendry ny fahatapahan'ny làlako dia voafafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
16. Ny demony rehetra izay mitondra aretina sy aretina amin'ny fiainako dia horavana amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
17. Ny demonia rehetra amin'ny fahantrana eo amin'ny fiainako dia ho fongotra amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
18. Ny feo ratsy rehetra manohitra ny fiainako dia ho fongotra amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
19. Ny asan'ny mpamosavy sy ny mpanao ody rehetra amin'ny fiainako dia rava izao ao amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
20. Notorotoroiko ny menarana rehetra sy ny maingoka izay manohitra ahy ankehitriny amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
21. Namoaka ireo mpiady niady aho mba handrava ny drafitry ny fahavalo hanohitra ny fiainako amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
22. Nambarako fa tsy voafehy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho
23. Ambarako fa tsy mahay saro-pantarina ao amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy aho
24. Ambarako ny fahefana rehetra manodidina ahy amin'ny demonia rehetra ao amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
25. Manda ny fahajambana ara-panahy amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy aho
26. Amin'izao andro izao, dia handeha amin'ny fankasitrahana aho amin'ny tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
27. Ireo rehetra hiady amiko amin'ity taona ity dia hofongorana amin'ny anarana Jesosy Kristy
28. Nataoko daholo izay olona mpihetsiketsika nipetraka teo amin'ny fiainako tamin'ny Anaran'i Jesosy Kristy
29. Manambara aho fa voatahy amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy aho
30. Misaotra an'i Jesosy.
Previous lahatsoratraAhoana no fomba hivavahana mandaitra
Next lahatsoratraAhoana no ahalalako fa voavaly ny vavaka ataoko?
Vavaky ny ady ara-panahy 50 amin'ny fatiantoka ara-bola
Ny Vavaka Holazaina Amin'ny Andron'ny Fahirery sy ny Fahakiviana
40 Manondro fanoherana ny ozona ny fianakaviana